DRC: ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဒီစနေနေ့7စက်တင်ဘာလ 2019 - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: ဤစနေနေ့7စက်တင်ဘာလ 2019 ၏ကင်ရှာဆာစာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
- ကင်ရှာဆာ၌ဤနံနက်အွန်လိုင်းတွေ့ရှိခဲ့အဆိုပါသတင်းစာ, အစိုးရ Ilunga Ilunkamba ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲကလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည်လွှတ်ပေးရေးကိုလည်းစီးပွားရေးဖိုရမ်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတက Makutano ဖွင့်လှစ်ဖို့အရေးကြီးပုံကိုအလေးထား။
ခေါင်းစဉ်ပြပွဲ, ဖွင့်လှစ်သူအ CAS-INFO.CA "က၎င်း၏အစီအစဉ်၏မွေးစားပြီးနောက်အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံအဆိုပါ Ilunkamba အစိုးရ။ " အစိုးရကမျက်နှာစုံညီသပိတ်မှောက်တဲ့သူကအတိုက်အခံအမတ်များ၏မရှိခြင်းအတွက် FCC သည်-Cache ညွန့်ပေါင်း၏အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ဝင်များက Ilunkamba သောကြာနေ့6စက်တင်ဘာလကျူးလွန်ခဲ့သည်, ဒီသတင်းအချက်အလက် site ကိုပြီးဆုံး။ အမျိုးသားရေးလက်ထောက်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှပြန်ကြားခြင်း, CAS-INFO.CA Sylvestre Ilunga သည်သူ၏ကတိပေးဆက်လက် "အစီအစဉ်တွင်မယ့်သူ့အစိုးရ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲပြီးနောက်ရှယ်ယာစီစဉ်ချပစ်လိမ့်မည်။ "
အလားတူမီဒီယာ, အခြားဆောင်းပါးထဲမှာအဖြစ် UDPS နှင့်၎င်း၏ဝန်ကြီးများကချမှတ်သည့်အခြေအနေများအကြောင်းပါခဲ့ "အစိုးရ: UDPS" ခံ့ညား "သူ၏ဝန်ကြီးများဟာသူတို့ရဲ့န်ထမ်းများ၏% 70 ။ " အဆိုပါ UDPS ကနေအားလုံးဝန်ကြီးများ, သူတို့ရဲ့ဗီဒို၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် 30% ခွဲတမ်းအဘို့အနည်ထိုင်လတ်တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်။ "အခြားအဖွဲ့ဝင်များကပါတီများကအကြံပြုပါလိမ့်မည်။ "မှတ်စုများ CAS-INFO ပါတီအနေဖြင့်တစ်ဦးမြို့ပတ်ရထားကိုးကား။
ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, ကွန်ဂိုသတင်းအေဂျင်စီ (ACP) "ဖေလဇ်မင်း-Antoine Tshisekedi ကသူ့ဆီနီဂေါအဆွေတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mackie Sall ၏အားပေးမှုစိတ်ချ။ " အမည်ရှိ Makutano ဖိုရမ်ကနေဧည့်သည်များနှင့်အတူနိုင်ငံတော်သမ္မတ၏အစည်းအဝေးများ evokes အဆိုပါ agencier ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်း, ဖဲ-Antoine Tshilombo Tshisekedi, စောင့်ကြည့်တာဝန်ခံ, သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်သမ္မတငှါ, Nation ၏နန်းတော်မှာသောကြာနေ့ကပရိသတ်ကိုမစ္စတာ Cheik Kant, ဆီနီဂေါဝန်ကြီးလက်ခံရရှိကြောင်းအစီရင်ခံ ဆီနီဂေါမြေပုံပေါ်ထွက်လာသူဆီနီဂေါသူ၏အဆွေတော်, Mackie Sall ၏မိတ်ရှေ့ဆက် လာ. , တစ်ပြိုင်နက်ကင်ရှာဆာ5èmeဖိုရမ် Sultani Makutano အတွက်အဖွဲ့အစည်းကိုရည်မှတ်သည်သူ၏ပဏာမခြေလှမ်းအဘို့အားပေးခြင်း transmit ။
အဆိုပါ 7SUR7.CD သတင်းအချက်အလက် site ကို, အဆီနီဂေါဝန်ကြီး relaying အားဖြင့်အတူတူပင်လမ်းခံစားရပါတယ်။ အလွန်ကြီးစွာသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူ setting "ဒီနေ့, ကွန်ဂိုကသမ္မတ Tshisekedi ။ နှစ်အနည်းငယ်ခုနှစ်, ကွန်ဂိုပြင်းပြင်းထန်ထန် "ဟုအဆိုပါ site ကိုဖတ်, metamorphosed ပါလိမ့်မယ်။
ထိုမှတပါး, CONGOPROFOND.NET "15 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ" ၏အမှုနှင့် ပတ်သက်. ဖေလဇ်မင်း Tshisekdi ၏အနေအထားကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းနှင့်ခွင့် "ဖဲ Tshisekedi ယင်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏ချဉ်းကပ် disapproves ။ " ဤရွေ့ကား, ဘဏ္ဍာရေးအထွေထွေစစ်ဆေးရေးမှူးများ၏မမှန်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်ပတ်လည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအဆုံးသတ်ထားသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမီဒီယာကရေးသားခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကုန်သည်များမှ Pullman စသည့် Makutano ဖိုရမ်ဖွင့်လှစ်စုဝေးဟောပြောအကြီးအကဲပြည်နယ်အန်သိုနီဖဲ Tshisekedi ပုဇွန်း၏နောက်ကျောကတဆင့်မသွားဘဲ, CONGOPROFOND.NET commented ။
"ငါသည်အဘယ်သူ၏ကုမ္ပဏီများသည်အချို့သောပြည်နယ်န်ဆောင်မှုများ၏အစိတ်အပိုင်းမှဘာသာရပ်များမှာမဆိုကြင်နာ၏နှောင့်ယှက်ဟန့်တားရန်မီးရထားခြေလှမ်းများယူစတင်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ချချင်ပါတယ်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဘာသာရပ်စီးပွားရေးအော်ပရေတာဖြစ်ကြောင်းသမျှပေါ့ပ်သတိပေးချက်များကိုရပ်တန့်ရန်သေချာမည်သာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများဥပဒေရေးရာနှင့်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်း, "Tshisekedi မီဒီယာများကလက်ဆင့်ကမ်းကဆိုသည်။
Dido အဘိဓါန် Nsapu K.
(မသိ / PKF)